Ngabe ukulethwa kweDrone kuzoqala ngokushesha? | Martech Zone
Ngabe ukulethwa kweDrone kuzoqala ngokushesha?
NgoMgqibelo, Januwari 26, 2019 NgoMsombuluko, Januwari 28, 2019 Douglas Karr
Ukuhlola ubuchwepheshe bamuva yingxenye emnandi yomsebenzi wami. Imvamisa ngithenga ubuchwepheshe ukuze nje ngiyivivinye futhi ngiqinisekise ukuthi ngiyahambisana. Ezinyangeni ezedlule, ngithenge i- I-DJI i-Mavic Air, futhi ngayihlola ngamakhasimende ambalwa.
Angiyena umdlali wegeyimu, ngakho-ke ngigqwalile ngemuva kwesilawuli. Ngemuva kokuyihlola ezindizeni ezimbalwa, yangimangaza indlela le mishini ezindiza ngayo. I-drone iyasuka futhi ihlale yodwa, izohambisana nemingcele yophahla, izondiza amaphethini ahleliwe, futhi izolandela nezimpawu zezandla.
Njengoba ama-drones asevele ethuthuka kakhulu, kunjalo ukulethwa kwe-drone ngokudayisa kanye ne-ecommerce kuyeza maduze? Angiqiniseki ukuthi kunjalo. Ngenkathi ukulethwa okuvela ezitolo nasezinqolobaneni kungaba kude nemizuzu futhi kunganciphisa kakhulu izindleko zokuthumela, kunezinkinga ezimbalwa okufanele zinqotshwe ngama-drones, kufaka phakathi:
Ukuphepha kweDrone - ama-drones angaba nokwehluleka kwemishini noma okunye ukwehluleka kwezobuchwepheshe endizeni. Njengoba izigidi zazo zindiza edolobheni, nakanjani sizolimala impahla futhi, mhlawumbe, ngisho nokulimala komuntu siqu.
Ukukhathazeka kwangasese - Akungabazeki ukuthi yonke idrone izobe iqopha ukunyakaza kwayo konke. Ngabe silungele yonke imisebenzi yethu yansuku zonke ebhalwa ngaphezulu? Angiqiniseki ukuthi sikulungele lokho okwamanje.
Imikhawulo Yezindiza - Ngihlala eduze kwesikhumulo sezindiza sikamasipala, ngakho-ke kukhona uphahla kunoma yiziphi izindiza ezithathayo. Ama-Drones endiza phansi azokwenza umsindo omkhulu kakhulu. Ama-Drones endiza phezulu angadinga ukuhanjiswa azungeze izimpawu zomhlaba, amabhilidi, nezindawo ezingekho zindiza. Kuzofanele sakhe imigwaqo emikhulu ebonakalayo… engadonsela phansi ukusebenza kahle kokulethwa kwephoyinti-ne-phuzu futhi inciphise ukusebenza kahle kwama-drones imayela lokugcina.
Imiklamo kaMcKinsey yokuthi izimoto ezizimele ezibandakanya ama-drones zizokwenza thumela ama-80% azo zonke izinto ngokuzayo. Futhi ngabathengi abangama-35% abakhombisa ukuthi bayawuthanda umqondo, kuyacaca ukuthi ukusetshenziswa kwama-drones kuya ngokuya kuthandwa.
Akungabazeki ukuthi ukulethwa kwe-drone kuyeza, kepha kunemicabango eminingi nokuhlela okudinga ukungena kulezi zinselelo. Lokhu infographic kusuka 2low, umlingani wokugcwaliseka okhishwe ngaphandle, uhlola izinzuzo nezinselelo ezihambisana ne-cargo drones futhi aqhakambise ukuthi lobu buchwepheshe bungaphazamisa kanjani kakhulu ukulethwa kwamamayela wokugcina.
Tags: Droneukulethwa kwe-droneuavimoto engasenakunyakaziswa
10 Ubuchwepheshe Besimanje Obuthuthukisa Ukumaketha Kwedijithali
Amathuluzi Wokumaketha ayi-9 Okukusiza Ngokushesha Ukwakha Okungcono Kwe-Blog